ကြီးထွားလာတဲ့ ရန်ကုန်ဆီမှောင်ခိုဈေးကွက် (တန်းမစီချင်တဲ့သူတွေ ကြိုက်သလောက် ဝယ်လို့ ရပါပြီတဲ့)… – SainPwar
SainPwar > local news > ကြီးထွားလာတဲ့ ရန်ကုန်ဆီမှောင်ခိုဈေးကွက် (တန်းမစီချင်တဲ့သူတွေ ကြိုက်သလောက် ဝယ်လို့ ရပါပြီတဲ့)…
ရန်ကုန်မြို့ရှိ စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်အများစုမှာ ဆီကို အကန့်အသတ်ဖြင့်သာ ရောင်းချလာခြင်းကြောင့် ဆီမှောင်ခိုစျေးကွက် တကြော့ပြန် ပေါ်ပေါက်လာတယ်လို့ ယာဉ်မောင်းအချို့ထံမှသိရပါတယ်။
ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ဆီလက်ကျန်နည်းပါးလာသည့်အတွက်ကြောင့်ဟုဆိုကာ ပုံမှန်ဖွင့်နေကျ ဆီဆိုင်များကအရောင်းရပ်ခြင်း၊ ကားများအား လိုသလောက် မရောင်းဘဲ အကန့်အသတ်ဖြင့်သာရောင်းချလာပြီးနောက် မှောင်ခိုစျေးကွက်ဖြစ်လာတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဆီမှောင်ခိုဈေးကွက်မှာ ကားသမားအချင်းချင်းပဲ ပြန်ရောင်းကြကြောင်း၊ ဆိုင်ဈေးထက် အနည်းငယ်ပိုကြောင်း ၊ ဆိုင်ရောင်းဈေးထက် တလီတာကို ၃၀၀ လောက်ပိုပေးရကြောင်း၊ တန်းစီစရာမလိုဘဲ လိုသလောက်ဝယ်လို့ ရကြောင်း အငှားယာဉ်မောင်း တဦးက ပြောပါတယ်။
မှောင်ခိုရောင်းချသူတွေက ဆီဆိုင်အချို့နှင့်ပေါင်းပြီး ဆီကို ပေပါလိုက်ဝယ်ယူခြင်း၊ ကားဖြင့်အကြိမ်ကြိမ်ထုတ် ယူခြင်းတို့ ပြုလုပ်ကာ အပြင်တွင်လိုအပ်နေသူများအား ပြန်လည်ရောင်းချနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
“စျေးကွက်မှာ ပစ္စည်းရှားလာရင် မှောင်ခိုသမားက အလိုလိုကို ပေါတာ။ အခုအနေအထား ဆက်ကြာနေမယ်ဆိုရင် ဆီမှောင်ခိုစျေးကွက်ကပိုကြီးထွားလာနိူင်တယ်”ဟု စက်သုံးဆီစျေးကွက်နှင့်နီးစပ်သူတစ်ဦးကပြောပါတယ်။
လက်ရှိတွင် စက်သုံးဆီစျေးကြီးမြင့်ခြင်းနှင့်အတူ ဆီလက်ကျန်နည်းပါးမှုမှာ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေပြီး စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်တွေမှာ အချိန်ကြာမြင့်စွာ စောင့်ဆိုင်းရမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။
စက်သုံးဆီတင်သင်္ဘောများ ဝင်ရောက်လာပြီဖြစ်၍ ပုံမှန်အတိုင်းရောင်းချပေးနိူင်တော့မယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံ စက်သုံးဆီ တင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ဖြူးရေးအသင်းက ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပေမယ့် ဈေးနှုန်းအကြောင်းကိုတော့ တခွန်းမှ မပြောသေးတာကို တွေ့ရပါတယ်။
စကစဟာ ဧပြီလမှစပြီး အမေရိကန်ဒေါ်လာသုံးစွဲမူကိုချုပ်ကိုင်လိုက်ပြီးနောက် စက်သုံးဆီအပါအဝင် သွင်းကုန်လုပ်ငန်းများထိခိုက်မှု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ လုပ်ငန်းရှင်တွေက ပြောပါတယ်။ “ဒေါ်လာဝယ်ရခက်သွားတော့ အချိန်န်မီငွေသွင်း၊ ငွေထုတ်လုပ်ရတာ ခက်ကုန်တယ်။ မူမပြောင်းမချင်းကတော့ အခုလို ဖြစ်နေဦးမှာပဲ”ဟု စက်သုံးဆီလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးကပြောပါတယ်။
ထိုသို့ စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်များ၌ ဆီပြတ်လပ်မှုဖြစ်စဉ်မှာ ဧပြီလကုန်ပိုင်းက တစ်ကြိမ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး ယခုဒုတိယအကြိမ်မြောက်ကြုံတွေ့ရခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ယခုလို ဆေးမြီးတို ပုံစံနဲ့ မဗေဒါ ရေခပ်သလိုလို တစိမ့်စိမ့်ပဲ သွင်းခွင်းပြုရင်တော့ ဆီမှောင်ခိုဈေးကွက် ပိုကြီးမားလာပြီး မလိုလားအပ်တဲ့ အခြေအနေတွေ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့ ဈေးကွက်သုံးသပ်သူတွေက ပြောပါတယ်။
ဆီဈေးကြီးမြင့်လာခြင်းနဲ့အတူ ကုန်ဈေးနှုန်းများ ပိုမိုကြီးမြင့်လာမှာ ဖြစ်ပြီး မတိုးတာကတော့ ပြည်သူတွေရဲ့ ဝင်ငွေတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်ထက် လျော့နည်းလာတဲ့ ဝင်ငွေတွေနဲ့ မိုးထိအောင် တိုးတက်လာတဲ့ ကုန်ဈေးနှုန်းတွေကို မည်သို့မည်ပုံ မီအောင်လိုက်နိုင်မလဲလို့ စဉ်းစားရင်း….
Previous Article စက်ရုံလုပ်သားတွေ ကျတဲ့ မျက်ရည် (တနေ့ လုပ်ခ လစာ ၄၈၀၀ မရကြတော့သူများ)
Next Article မိုးမင်းသမီးလေးကတော့ ၂၃. ၂၄ ရက်မှာ မိုးရွာမယ့်ဒေသကိုပြောလိုက်ပါပြီ….